Radio Namaste 96.5 MHz नेपाली विद्यार्थीको रोजाईमा परेका यी हुन् १० उत्कृष्ट मुलुक
वैदेशिक शिक्षाको लागि स्वदेश छोड्नेहरूको लर्को बढेसँगै पढाइका लागि नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजी पनि भइरहेको छ। पढाइ र रोजगारीलाई सँगसँगै बढाउनुपर्ने बाध्यता र सकेसम्म पढाइको अवधिमा कमाइएको धेरथोर रकम स्वदेश पनि पढाउनुपर्ने दबाबका कारण विद्यार्थीहरू यी सबै समस्यालाई सहज रूपमा पार गराउन सहयोगी हुने मुलुक र ती मुलुकका क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयको खोजीमा छन्। विद्यार्थीको यो चाहनालाई पूरा गर्न शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरूले पनि भरपूर सहयोग गरिरहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका केही वर्षअघिसम्म विद्यार्थीको रोजाइमा युरोप अमेरिका, अस्टे«लियामा अब्बल ठहरिएका विश्वविद्यालय तथा कलेजहरू मात्र विद्यार्थी रोजाइमा पर्ने गरेका थिए। त्यसो त त्यतिबेला विदेशको पढाइ स्वदेशको पढाइमा अब्बल भएका र आर्थिक हैसियत राम्रो भएका विद्यार्थीका लागि मात्रै हो भन्ने आमबुझाइ थियो। तर पछिल्ला वर्षमा यो ट्रेन्ड बदलिएको छ। सम्पन्न परिवारदेखि मध्यम वर्गका विद्यार्थीलाई पनि सहज रूपमा प्रवेशाज्ञा (भिसा) पाइने हुनाले यसतर्फ विद्यार्थी आकर्षण बढ्न थालेको हो।
मन्त्रालयका पछिल्ला नौ महिनाको तथ्यांकअनुसार विश्वका ७० मुलुकमा नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएर गएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै अस्ट्रेलिया गएका छन् भने श्रीलंका, युक्रेन, आइसल्यान्ड, भियतनाम, दुबई, बु्रनाईलगायत मुलुकमा एक जना मात्र विद्यार्थी गएका छन्।
उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा एक दशकदेखि अस्ट्रेलिया पर्ने गरेको छ। एक देश एक महादेशको नामले परिचित अस्ट्रेलियामा नौ महिना ९२०७४ वैशाखदेखि पुष० सम्ममा १९ हजार सात सय ७७ जना नेपाली विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने भन्दै नो अब्जेक्सन लेटर लिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस मुलुक जान चाहनेले भिसा प्रोसेसिङका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’ वर्गका सबै बैंकबाट आवश्यक कागजपत्र बनाउन सक्छन्। नेपालमा अस्ट्रेलियन दूतावास रहे पनि अस्ट्रेलिया जान चाहने नेपाली विद्यार्थीले भिसा प्रोसेसिङका लागि आवश्यक कागज दिल्ली पठाउनुपर्ने बाध्यता छ। अस्ट्रेलियाले सन् २०१६ जुलाईदेखि विदेशी विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरी नयाँ भिसा नीति लागू गरेको थियो। जुन नीतिअनुसार मुलुक र शिक्षण संस्थाको पनि वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ। विदेशी मुलुक र त्यहाँका नागरिकले भिसा नीति लागू गरेको वा नगरेको आधारमा त्यस्ता मुलुकको जोखिम वर्गीकरण हुने गरेको छ। सोही वर्गीकरणका आधारमा नेपाल ‘जोखिम मध्यम’ भएको मुलुक एसेस्मेन्ट लेभल टु ९एएल टु० मा परेको छ। जोखिम अधिक भएको मुलुकलाई ‘एएल थ्री’ र जोखिम कम भएको मुलुकलाई ‘एएल वान’ मा वर्गीकरण गर्ने अस्ट्रेलियन सरकारको नीति छ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा अस्ट्रेलियापछि जापान पर्ने गरेको छ। मन्त्रालयबाट नौ महिनाको अवधिमा जापानका विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अध्ययनका लागि जान नो अब्जेक्सन लेटर लिनेको संख्या ६ हजार दुई सय ८९ जना रहेका छन्। जापान जान चाहने विद्यार्थीका लागि अन्य मुलुकको तुलनामा प्रवेशाज्ञा नीति खुकुलो छ। जापान जान चाहने विद्यार्थीले आफू अध्ययन गर्न जान खोजेको संस्थामा पेस गर्न लागेको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी कागजात यहाँका बैंक, फाइनान्स वा सहकारी संस्था जहाँबाट बनाए पनि हुन्छ। तर, त्यहाँ तीन वर्षदेखि नियमित कारोबार भने गरिरहेको हुनुपर्छ। यस व्यवस्थाले मध्यमस्तरको आम्दानी हुने विद्यार्थीलाई कागजपत्र बनाउन सहज भएको छ।
नेपाली विद्यार्थी जापान गएर सीधै विश्वविद्यालय वा क्याम्पस भर्ना हुन पाउँदैनन्। एक सय ५० घण्टाको जापानी भाषाको अध्ययन गरिसकेपछि त्यहाँ गएर १५ महिनादेखि दुई वर्षको भाषा कक्षामा भर्ना हुनुपर्ने हुन्छ। भाषा कक्षाको अध्ययनपछि मात्र क्याम्पस भर्ना हुने व्यवस्थाले उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। भाषा कक्षाको अध्ययनकै क्रममा साताको २८ घण्टा काम गर्ने अनुमति विद्यार्थीलाई दिइन्छ।
३. संयुक्त राज्य अमेरिका
हरेक नेपालीको सपना बनेको संयुक्त राज्य अमेरिका नेपाली विद्यार्थीका लागि पनि सपनाको मुलुक जस्तै भएको छ। भिसा पाउन कठिन तर भिसा पाएर गइसकेपछि जीवनयापन गर्न सहज हुने मुलुकको रूपमा अमेरिकालाई लिइन्छ। पछिल्ला नौ महिनाको अवधिमा यस मुलुकमा दुई हजार दुई सय ९९ जना विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि त्यसतर्फ गएका छन्। यस हिसाबले नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा यो चौथो मुलुकको रूपमा रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार केही समयअघिसम्म अमेरिका विद्यार्थीका लागि पहिलो वा दोस्रो रोजाइको रूपमा रहने गरेको थियो।
सहज रूपमा आवागमन सुविधा भए पनि तथ्यांकअनुसार छिमेकी मुलुक भारत नेपाली विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा अध्ययनमा जाने मुलुकमध्ये चौथो नम्बरमा परेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले भारत जान चाहने विद्यार्थीलाई नौ महिनाको अवधिमा एक हजार तीन सय ५६ जनालाई नो अब्जेक्सन लेटर दिएको छ। यद्यपि विद्यालय तहको अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिन नपर्ने भएका कारण कति विद्यार्थी भारतमा पढिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन। उच्च वर्गका परिवारले अहिले पनि भारतका महँगा स्कुलमा आफ्ना छोराछोरी पढाइरहेका छन्। हरेक वर्ष भारतका स्कुल सञ्चालकहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरेर काठमाडौंलगायत सहरमा शैक्षिक मेलाको आयोजना गर्दै आएका छन्।
उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने मुलुकमध्ये पाँचौं रोजाइमा पर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। मन्त्रालयको शैक्षिक प्रमाणीकरण शाखाका अनुसार पछिल्ला नौ महिनाको अवधिमा अध्ययनका लागि चीन जाने एक हजार तीन सय ५५ जनाले नो अब्जेक्स लेटर लिएका छन्। यस मुलुकमा विशेषगरी विद्यार्थीहरू सरकारी छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस तथा इन्जिनियरिङ र अन्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय पढ्न जाने गरेका छन्। त्यसबाहेक अन्य विषय अध्ययनका लागि पनि विद्यार्थी जाने गरेका छन्। यस्ता विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय तथा कलेज छनोट गर्न र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन परामर्श दातृ संस्थाहरूले सहयोग गर्दै आइरहेका छन्।
पोल्यान्ड पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको चाहना पूरा गरिदिने उत्कृष्ट मुलुकको रूपमा दरिएको छ। विद्यार्थी आकर्षणको आधारमा यो मुलुक छैटौं नम्बरमा पर्दै आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत वैशाखदेखि पुस महिनासम्ममा पोल्यान्ड पढ्न जाने भन्दै एक हजार ९५ जना विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। सहजै भिसा पाइने र पढाइ तथा रोजगारीलाई पनि सँगसँगै लैजान सकिने हुनाले यो मुलुक विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने गरेको हो। यस मुलुकमा विद्यार्थी आकर्षण बढ्नुको अर्को कारण अमेरिका, अस्टे«लिया बेलायतलगायत अन्य युरोपियन मुलुकको तुलनामा केही सस्तो शुल्क हुनु पनि एउटा कारण रहेको परामर्शदातृ निकायका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा क्यानडा जानका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिने विद्यार्थी संख्या सात सय ५५ पुगेको छ। विद्यार्थी रोजाइका हिसाबले यो मुलुक सातौं नम्बरमा परेको छ। झन्झटिलो प्रक्रिया र भिसा पाउन कठिन भएका कारण क्यानडाप्रति नेपाली विद्यार्थीको रुचि कम देखिएको हो। विशेषगरी नेपाली विद्यार्थी स्नातकोत्तर, एमफील र पीएचडी गर्न क्यानडा जाने गरेका छन्। यस्ता विद्यार्थीहरूमध्ये परामर्शदातृ निकायको परामर्शमा भन्दा पनि सीधै विश्वविद्यालयमा सम्पर्क गरेर जानेहरू धेरै छन्।
८. दक्षिण कोरिया
नेपाली श्रमिकका लागि राजगारीको आकर्षक गन्तव्य बनेको दक्षिण कोरिया अध्ययनका लागि पनि नेपाली जाने गरेका छन्। यो मुलुक जान पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा सात सय एक नेपाली विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। अन्य मुलुकको तुलनामा सस्तो शुल्क, खान तथा बस्न सहज, सजिलो भिसा प्रक्रिया र भिसा पाउने सम्भावना पनि धेरै भएका कारण विद्यार्थीको रोजाइमा यो मुलुक पर्ने गरेको हो।
युरोप महादेशमा माल्टा र लक्जेम्बर्गपछि तेस्रो सानो मुलुकको रूपमा रहेको साइप्रस पढ्नका लागि पाँच सय ५२ जना विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस छनोटमा सहज प्रक्रिया, सहजै भिसा पाइने भएकाले साइप्रस नेपाली विद्यार्थीको रुचिमा परेको हो।
उच्च शिक्षाका लागि जर्मनी विश्वभरका विद्यार्थीहरूमाझ तेस्रो लोकप्रिय मुलुकमा पर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। जर्मनका विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमध्ये १२ प्रतिशत विदेशी रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। तर, नेपाली विद्यार्थीका लागि भने उच्च शिक्षा अध्ययनको विदेशी गन्तव्यमध्ये जर्मनी दशौं नम्बरमा परेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नौ महिनाको अवधिमा जर्मन अध्ययनमा जान चार सय ९४ विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। यो मुलुकलाई पनि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडाको तुलनामा सहज भिसा प्रक्रिया रहेको मुलुकको रूपमा मानिन्छ।